क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट र ढोगी–पाखण्डि कम्युनिष्टबारे ! हरेक कम्युनिष्ट सदस्यले पढ्नपर्ने महत्वपूर्ण लेख
‘धर्म शोषकवर्गको औजार हो’
प्रकासित मिति : २०७७ कार्तिक ११, मंगलवार प्रकासित समय : १४:१७
कम्युनिस्टहरुको दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन हो । यसको सारतत्व मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ । ढोगी र पाखण्डी कम्युनिष्टहरु दस्तावेजमा मार्क्सवादको कुरा गर्छन तर व्यवहारमा अध्यात्मवाद र धर्मको सहारा लिन्छन । उनीहरु रुपमा क्रान्तिकारी जस्तो देखिएता पनि सारमा संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादी चारित्रिक र व्यवहारीक विशेषता बोकेका हुन्छन । तीनिहरुमध्ये कोही अज्ञानता र अशिक्षाको कारण त कोही कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बदनाम र ध्वंस गर्न सूनियोजित ढंगले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घुसपैठ भएका हुन्छन ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, सुधारवादी दलदलमा फसाएर शोषणको चक्रव्यूहलाई बचाई राख्नु र पुरानो शोषणमूलक समाजलाई निरन्तरता दिन हरियो घाँसभित्र लुकेको साँपको जस्तो छद्यभेषी चरित्र प्रदर्शन गर्नु सुधारवादी, संशोधनवादी कम्युनिष्टहरुको मूल चारित्रीक विशेषता हो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र उसका नेता कार्यकर्ता समाजका श्रेष्ठतम् नागरिकको रुपमा आफूलाई उभ्याउन र मानव समूदायको परिवर्तनको सदीक्षा पूरा गर्न कस्तो ढंगको शिद्धान्त, विचार, संस्कृति, कार्यशैली र जीवनशैली अपनाउने भन्ने कुराले नै पार्टी र नेतृत्वको स्तर निर्धारण गर्दछ । भौतिक जगत, मानव समाज र त्यसमा भएका अनेकै क्रियाकलापलाई सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हेर्दा हामी कम्युनिष्ट वा गौर कम्युनिष्ट के हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । कम्युनिष्टहरुको दर्शन अध्यात्मवादी हो वा भौतिकवादी भन्ने कुरा छुट्याउनै गाह्रो बन्ने अवस्था कतिपय कम्युनिस्ट नेतृत्वका क्रियाकलापले सिर्जना हुन गएको छ, त्यसको निरुपण नगरी क्रान्तिकारी पार्टी र नेतृत्वको कल्पना गर्न सकिदैन ।
आदीमकालमा मानिसहरुको अज्ञानताले सृष्टि, जीवन र जगतका नियमहरुको उत्तर खोज्ने क्रममा मानव समुदायमाथि आइलाग्ने अनगिन्ति प्राकृतिक प्रकोप र पीडाहरुबाट राहत पाउने उदेश्यले उनीहरुले अदृश्य शक्ति (ईश्वर, राक्षस, भूतप्रेत) आदिलाई कारण माने । उनीहरुले झरी, वादल, चट्याङ, आँधीवेरी जस्ता घटनामा परलौकिक, अलौकिक, दानवी वा ईश्वर शक्तिको खेल भएको अनुमान गरे र सोही आधारमा अलौकिक शक्ति वा ईश्वरलाई स्थान दिन पुगे । मानिसको अशिक्षा र अज्ञानताको कारण त्यस समयमा कल्पनामा जन्माएको ईश्वरले आजको शताब्दीमा समेत राज गरिरहेको छ । विज्ञानको आलोकमा धर्मको मृत्यु भएको हजारौं वर्ष भैसक्दा पनि यसले आफ्नो अस्तित्व बचाउनुमा सामन्तवादी र पूँजीवादी सत्ताको हात रहेको छ । शासकवर्गले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न र शोषकवर्गले आफ्नो शोषणलाई जारी राख्न शक्तिशाली शास्त्रको रुपमा धर्मलाई संरक्षण गर्दै आएका छ ।
जव विज्ञानले पानी कसरी पर्छ, चट्याङ्ग कसरी चट्कन्छ, मेघ कसरी गर्जन्छ, आँधीहुरी वतास कसरी चल्छ, दिनरात कसरी हुन्छ, मानिसको जन्म र मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासाको हल गरी सकेपछि धर्म र आध्यत्मवादको मृत्यु भएको हो । विभिन्न भूगोल र कालखण्डमा मानिसहरुले आफूमाथि आईलागेका दुःखकष्ट, आपतविपत, झन्झट, अल्झनबाट संकटमोचनका लागि विभिन्न नाम र रुपका ईश्वरको कल्पना गरे जस्तो हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, शिख लगाएत अनगिन्ति धर्महरुको जन्म भयो । समयक्रममा विकास भएका धर्महरुको रुप फरक फरक देखिएता पनि सारमा धर्मले शासकवर्ग र पूँजीपतिवर्गको पक्षपोषण र सेवा गर्दै अएको छ । यसको सारतत्व परिवर्तन र श्रमजीविवर्गको मुक्ति विरुद्ध केन्द्रीत छ र यसले परिवर्तनलाई रोक्न आफ्नो भएभरको बासीबुद्धिको प्रयोग गर्दछ । विज्ञान र त्यसका परिवर्तनशील उपलब्धिको बिरोध गर्नु धर्मको मूल विशेषता रहेको छ । विज्ञान वा मार्क्सवाद श्रमजीवी कामदारवर्गको दर्शन र मुक्तिमार्ग हो भने धर्म सत्ताधारी शोषकवर्गको शोषण र दमनको शास्त्र र औजार हो ।
अध्यात्मवाद वा धर्म शोषकवर्ग र पूँजीपतिवर्गको दर्शन भएकाले यसले शोषक वर्गको सेवा गर्छ र मानवजातीलाई विभिन्न काल्पनीक कथा हालेर दासता र शोषणको दुष्चक्रमा फसाँइ श्रमजीविवर्गको प्रगतीपथलाई अवरुद्ध पार्दछ ।अध्यात्मवादीहरुले विज्ञानको विकासलाई अवरुद्ध गर्न विभिन्न कालखण्डमा भौतिकवादी वैज्ञानिकहरुमाथि अनेकन ज्यादतीका गर्नुका साथै वैज्ञानिकहरुलाई जलाउने सम्मका पाखण्डी हर्कत गरेको इतिहास हाम्रोसामु ज्यूदै छ। यदि धर्म र अध्यात्मवादले भने जस्तो पृथ्वीको उत्पतीको कारण ईश्वर भैदिएको भए धर्मै पिच्छेका अनेकै पृथ्वी हुन्थे र मानव जगतलाई सहज हुने थियो । शोषकवर्गले धर्म, तपस्या र दानदक्षिणाद्वारा आफ्नो मनोकांक्षा पूराहुने अन्धताको खेती गर्दै आइरहेकाछन । पुरोहित, पण्डित, पादरी आदीले दावी गरेजस्तै भेदिएको भए आज कतै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारको कुनै चिन्ता हुने थिएन ।
मार्क्सवाद विज्ञान हुनुका नाताले यसले पृथ्वीको उत्पत्ति, मानव जातीको विकासक्रम र भौतिक जगत त्यसका भौतिक र सामाजिक घटनाक्रमहरुको बस्तुगत र वैज्ञानिक व्याख्या विश्लेषण गर्दछ । कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादका वैज्ञानिक प्रस्थापनाहरुको आधारमा आफ्ना दृष्टिकोण र व्यवहारलाई प्रदर्शित गर्ने हुनाले अन्य बुर्जुवा भन्दा फरक ढंगको जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । कम्युनिष्टहरु नयाँ धातुले बनेका मान्छे हुन भनि स्टालिनले भन्नु भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा साँस्कृतिक रुपान्तरण भएको हुनुपर्छ अर्थात सांस्कृतिक रुपमै नयाँ मान्छे हुनु पर्दछ । नेपाल लगाएत भारतबेस्टित देशहरुमा मार्क्सवादी दर्शनमा भष्ट्रिकरण हुनु यसक्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक कारण प्रमुख बनेको छ । कम्युनिष्टहरुले आफ्नो विश्वदृष्ट्रिकोणद्वारा वर्ग, जात, वर्ण, धर्मका आधारमा मानव विभेदको अवस्थको वस्तुवादी र यथार्थ चित्रण गर्न सक्नु पर्छ ।
कम्युनिष्टहरुले सहि विश्दृष्टिकोण नबनाई न जगतलाई बुझ्न सक्छन् न त जगतलाई बदल्न नै सक्दछन् । कम्युनिष्टहरुले भौतिक जगत, मानव समाज र सामाजिक क्रियाकलापहरुको विश्लेषणा गर्दा धष्तजयगत ष्लखभकतष्नबतष्यल लय चष्नजत तय कउभबप भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै आफ्नो विश्वदृष्टिकोण बनाउनु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सर्वहारावादी संस्कृतिको विकास गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितिको नयाँढंगले विश्लेषण गर्न सक्नु पर्छ ।
यसरी हाम्रो जीवनशैलीले सर्वहारावर्गीय चरित्र ग्रहण गरेको छैन भने रुपान्तरणको विधि के हुन सक्छ ? त्यसको मार्क्सवादी निरुपण खोज्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जीवन व्यवहार हेर्दा कहिलेकाहीँ बुर्जुवा नेता तथा कार्यकर्ता भन्दा फरक पाउन सकिदैन जसको कारण जनताले कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट छुट्याउन गार्हो पर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा कुनै समय क्रान्तिकारी भनेर चिनिएका व्यक्तिबाट यतिसम्मको तल्लोस्तरको गैरसर्वहारा वर्गीय व्यवहार प्रदर्शीत हुन्छ कि उनीहरु सगौरव अध्यात्मिक र धार्मिक क्रियाकलापमा लागेको पाइन्छ । यो ढोगी र पाखण्डिपना हो साथै मार्क्सवादी स्कुलिङको कमि र रुपान्तरणको समस्या हो ।
वुर्जुवावर्गको दर्शनले ५ हजार वर्षदेखि एकछत्ररुपमा मानिसको दिमागलाई भ्रष्टिकरण र प्रर्दुशित पारेका थियो । जव सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्स र फेडरिक एगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र प्रकाशन गर्नु भयो त्यसपछि मात्र श्रमजीवी सर्वहारावर्गले आफ्नो सच्चा दर्शन पायो । मार्क्सवादी शिद्धान्तको विकासक्रम हेर्दा २७० वर्षको छोटो अवधिमा यसको प्रचार र छापको हिसावले धेरै अगाडि भएपनि रुपान्तरणको हिसावले निकै पछि परेको छ, जसको कारण यसवीचमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनगिन्ति श्रृखला घटेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन हुदापनि मार्क्सवादी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नसक्नु र आफ्नो पंक्तिलाई सुदृढ गर्न नसक्नु विडम्वना हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा जीवनभर काम गर्दापनि बुर्जुवावर्गको भन्दा माथिल्लो चेतनास्तर र जीवनशैली नहुनु सामन्तवादी अवशेष र संशोधनवादी रुझानको बिरासत हो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र वुर्जुवाहरुको नेतृतवमा व्यवहार उस्तै हुनुमा राजनैतिक, वैचारीक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको खडेरी हो, यस समस्याको लागि निरन्तर पार्टीभित्र स्कुलिङ र नेता कार्यकर्ताको परीक्षा प्रणालीको लागू गर्नु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले स्कुलिङ्ग बिभागको कामलाई पार्टी निर्माणको मुख्य आधार मान्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीको दर्शन वर्गसंघर्षको दर्शन भएकाले समाज र सामाजिक परिघटनाहरुको वर्गविश्लेषण गर्न निपुर्ण हुनु पर्दछ । कम्युनिष्टहरु साँस्कृतिक रुपमा रुपान्तरण नभई वास्तविक मानव बन्न सक्दैन । समाजमा रुपान्तरित नभएको पशुपतीका बाँदर जस्ता वुर्जुवा संशोधनवादीहरु ढोगी कम्युनिष्ट हुन भने रुपान्तरित भएको नयाँ पुर्खा भनेका क्रान्तिकारी कम्युष्टिहरु हुन । वाँदरबाट मानिसमा रुपान्तरण लामो र दीर्घकालीन संघर्षको परिणति थियो भने त्यो आफै अलौकिक वा स्वतःस्फुर्त रुपमा बदलिएको थिएन । आदिम सम्यवाद हुदै सामान्ती युग, पूँजीवादी युग र समाजवादी युगको वस्तुनिष्ठ बुझई बिना कोही पनि सच्चा कम्युष्टि बन्न सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी र वर्गसचेत डफ्फाको रुपमा विकास गर्न मार्क्सवादको रक्षा प्रयोग र विकासका साथै निरन्तर वर्गसंघषमा भाग लिनु पर्दछ । श्रम र वर्गसंघषबाट कटेको नेतृत्वले न परिवर्तनको पहल लिन सक्छ न कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बन्न सक्छ । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको वर्गसंघर्ष, उत्पादनको लागि संघर्ष र समाजको आमुल रुपान्तरण गर्ने नेतृत्वदायी संस्था हो । मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको वैचारिक दिग्दर्शनमा मात्रै सर्वहारावर्गको पार्टीले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले समाज र दुनियाँ बदल्न वैज्ञानिक विधिको आधारमा पार्टी संगठनलाई संचालन गर्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो उच्चतहदेखि आधारभूत तहसम्मको नेतृत्वलाई वैचारीक रुपमा पारंगत नबनाई क्रान्तिको कुरा निरर्थक बन्न जान्छ । जवसम्म नेतृत्वमा नै वैचारिक अस्पष्टता हुन्छ तवसम्म आन्दोलनले गोलचक्कर मात्रै मार्दछ क्रान्ति र परिवर्तन हुदैन । कम्युनिष्टहरुको रुपान्तरण कस्तो हो ? यो कसरी गर्न सकिन्छ ? र यसको वैज्ञानिक कार्यबिधि के हुनसक्छ ? यस्ता तमाम प्रश्नहरुको घेरामा क्रान्तिकारी नेतृत्वको परिक्षा हुदैछ । समाज र संस्कृति बदल्नको लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त नेता तथा कार्यकर्ता सांस्कृतिक रुपले नै बदलिनु पर्छ, जवसम्म नेता कार्यकर्ता बदलिदैन तवसम्म नयाँढंगको क्रान्तिकारी पार्टी बन्न सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टी र उसका नेता कार्यकर्ताले अन्धविस्वास, रुढिवाद र आध्यात्मिक चिन्तनको परित्याग नगरेसम्म न क्रान्तिकारी पार्टी निमार्ण हुन्छ, न क्रान्तिकारी नेतृत्वको जन्म नै हुन्छ न त क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । वैचारिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि विशेषतः क. माओले महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई निशर्तरुपमा प्रस्थान विन्दु मान्नु भएको थियो ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुमध्ये कुन पार्टी वास्तविकरुपमा कम्युनिष्ट पार्टी हो र कुन पार्टी ढोगी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर जाँच्ने विधि भनेको मालेमावादी विचारको अनुशरण र प्रयोग नै मुख्या आधार हो । कम्युनिष्टहरुले पारिवारिक सम्बन्धलाई वर्गधरातल कै आधारमा उभ्याउने कुरा कम्युनिस्टहरुको नीजि तथा व्यक्तिगत कुरा मात्र नभएर उसको विश्वदृष्टिकोण सवाल हो । जवसम्म परिवारलाई राजनीतिकरण र वैचारिकरण गर्न सकिदैन तवसम्म नेतृत्वको समेत रुपान्तरणमा ब्यवधान र अवरोध पैदा हुन्छ । बदलिँदो भौतिक जगतका हरेक चीजहरु गतिशील र परिवर्तनशील छन ।
भौतिक जगत, मानव समाज र सामाजिक क्रियाकलापले जनताको मानसिकतामा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाको बोध गराउदछ । पार्टी नेतृत्वको दृष्टिकोण र जीवनशैलीबाट कार्यकर्ताले सिक्ने भएकाले नेतृत्वले सदैव जनता, समाज र कार्यकर्ता पंक्तिको घेराबन्धी र निगरानीमा छु भन्ने कुरा कहिल्यै भुल्न हुदैन । वैचारिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका सम्बन्धमा नेता तथा कार्यकर्तामा किन धार्मिक र अध्यात्मिक चिन्तन, व्यवहार देखिन्छ यसको निराकरण नगरी क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी नेतृत्वको विकास हुन सक्छ ? कम्युनिष्ट नामका संशोधनवादी पार्टी नेतृत्वको वैचारिक र सांस्कृतिक विचलनको पराकाष्ठामा पुगेको कुरा उनीहरुका क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ । जस्तो प्रचण्डको भैसी पूजा र अन्य पूजापाठमा सहभागिता, ओेलीको पनि सोही प्रकृतिका आध्यात्मिक र धार्मिक कार्यमा सहभागिता, वैद्यजीको रुद्राक्षमोह र विप्लवको सांस्कृतिक पर्वदेखि छोराछोरीको बिबाह उत्सव आदि ।
यसरी आन्दोलनमा स्थापित नेतृत्वको सर्वहारा विश्वदृष्टिकोणमा आएको विचलनको प्रभावले कार्यकर्ता र जनतामा उल्टो रुपान्तरणको असरले प्रतिक्रान्तिलाई मलजल गरेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनका निष्ठावान कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वको गुणगान गाउने संस्कृतिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन ग्रसित छ । नेतृत्वका कमजोरीवारे खुलेर रचनात्मक आलोचना र नयाँ विकल्प पेश गर्ने हैसियत र क्षमताको विकास नगरीकन कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वलाई रुपान्तरण गराउन र प्रतिक्रान्ति रोक्न सकिदैन ।
कम्युनिष्टहरुले धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण वैज्ञानीक र मालेमावादी हुनुपर्दछ । कम्युनिस्टले श्रमजीवी सर्वहारावर्गले गरेका किर्तीमान, पराक्रम, पौरखलाई उच्चसम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नु पर्छ । कम्युनिस्ट नेताकार्यकर्ताले धार्मिक, अध्यात्मिक, रुढिवादी, अन्धविस्वासलाई निर्मम भएर त्याग्न सक्नु पर्छ । प्रगतिशील आन्दोलनको स्मरण गर्दै विभिन्न उत्सव मनाउने र त्यो आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको संस्कृतिको अनुसरण र विकास गर्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीले श्रमजीवीवर्गको जनअधिनायकत्वलाई केन्द्रमा राखेर पूँजीवादी अधिनायकत्वलाई चुनौती खडा गर्नु पर्दछ । नीजि स्वामित्वको पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजानिक स्वामित्व, सामूहिक जीवनशैली र सर्वहारावर्गीय पक्षधरतालाई अनिवार्य श्रर्त बनाउनु पर्दछ ।
जनअधिनायकवाद अर्थात सामाजिक स्वामित्वको नीतिमा दृढ हुनु कम्युनिस्टको इमानदारिता हुन्छ । जसरी वर्गबैरिको बुर्जुवा तथा पूँजीवादी अधिनायकवाद हुन्छ त्यसैगरि श्रमजीवीवर्गले सर्वहारा जनअधिनायकत्वलाई दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्नु पर्दछ । वर्गवैरीप्रति उदारभाव राख्नु र विजातीय विचार दृष्टिकोणप्रति मौन बस्नु कम्युनिष्टहरुको सुधारवादी विचलनको पराकाष्ठा हो । विजातीय विचार, व्यवहार, जीवनशैली विरुद्ध निर्मम हमला नगरी मार्क्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोग गर्न सकिदैन । कम्युनिस्टहरुलाई धर्म मान्ने र रीतिरिवाज मनाउने छुट हुदैन, जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ र राज्य धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा कम्युनिष्टले कहिल्यै भुल्नु हुदैन । कम्युष्टिहरुले जनताका भावना बिपरित केही काम गर्न हुदैन । कम्युनिस्ट भनेका समाज परिवर्तनका सम्बाहक शक्ती हो । समाज रुपान्तरणमा कम्युनिस्टहरुको निर्णयक र प्रथम भूमिका हुन्छ । सर्वहारावर्गबिना संसार परिवर्तन भएको इतिहास पाइदैन । वैज्ञानिक अविस्कार भौतिकवादी दर्शनका आधारमा भएको हुनले संसारमा नयाँ नयाँ प्रविधिको बिकास भएको हो । यदि विज्ञानको बिकास नभई धर्मकर्मको आधारमा भएको भए मानवजातिको जीवन जंगली युगकै जस्तो कहालीलाग्दो हुने थियोे । मानिसहरु ओढारमै हुन्थे, रुखका बोक्राको वस्त्रभन्दा अरु चीजको प्रयोग हुने थिएन ।
विज्ञानका अनगिन्ती अविस्कारले आज विश्वलाई धेरै सुगम र सानो बनाई दिएको छ । मार्क्सवादले विज्ञानकै आधरामा दुनियाँलाई बुझ्ने र बदल्ने हुनाले हामी पनि वैज्ञानिक युगका वैज्ञानिक मान्छे बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्छ । धेरै पढेलेखेका मान्छे मात्रै वैज्ञानीक हुन्छन् भन्ने कतपियमा भ्रम छ त्यो कदापी सत्य होइन कयैं निरक्षर मुर्ख अज्ञानीहरुले पनि अनेकै दुखकष्ट र साधना गर्दै अनेकै अविस्कार गरेका छन् । हामी सबै रुपान्तरणको महासमरमा सामेल हौं असम्भव मूर्ख र अज्ञानीको डायरीमा मात्रै हुन्छ ।
(लेखक तिमल्सिना नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा कलम चलाउने गर्नुहुन्छ ।)